Eye Drops မျက်စဉ်းအမျိုးမျိုး - သစ်ထူးလွင် (ကျန်းမာရေး) '; summ = summary_img; } var summary = imgtag + '
Eye Drops မျက်စဉ်းအမျိုးမျိုး
ဆရာ ကျွန်တော့် နာမ်မည့့် ပါ မလေးရှားကလာပါတယ်။ အသက်က ၄၇ ပါဆရာ။ မျက်စဉ်းဆေး မေးချင်လို့ပါ မလေး မှာ နေတုန်းက regular eye drops ကို သုံးပါတယ် အဆင်ပြေတယ် ဒီကိုရောက်တော့ ရှာလို့မရဘူး ဆေးဆိုင်မှာမေးတော့လည်း သုံးဘူးတဲ့ နမှုနာယူခဲ့တဲ့ ကျွန်တော့မှာ မရှိတော့ဘူး အကြံညာဏ် လေးတောင်းချင်လို့ပါ ဘယ်မျက်စဉ်း ဆေးသုံးသင့်သလဲဆိုတာ ကူညီပါအုံးဆရာ အလုပ်ကပြန်လာလို့ ညအိပ်ယာဝင်ရင် မျက်လုံးကကျိန်းစပ်စပ် ဖြစ်နေတယ်ဆရာ အပမ်းမကြီးဘူးဆိုရင် သုံးသင့်တဲ့ မျက်စဉ်းဆေးညွှန်ပေးပါ။ ဆရာ လေးစားလျက်။
သူများနိုင်ငံတွေမှာ ဆေးဆိုင်ကနေ အလွယ်ဝယ်ရတာနဲ့ ဆရာဝန်လက်မှတ်နဲ့မှဝယ်ရတဲ့ မျက်စဉ်းတွေလို့ ခွဲထားတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဆီမှာတော့ ပိုက်ဆံပေးရင် ကြိုက်တာကို ကြိုက်သလောက်ရနိုင်တယ် ထင်တယ်။ မျက်စိက Dryness ခြောက်နေလို့၊ Redness နီရဲနေလို့၊ Itching ယားနေလို့၊ Allergies အလာဂျီရနေလို့၊ Soreness နာနေလို့၊ Swelling ရောင်နေလို့၊ Eye Discharge မျက်ရည်-မျက်ဝတ် တခုခုထွက်နေလို့ နဲ့ Infection ပိုးဝင်လို့ဆိုတဲ့ အကြောင်းတွေကြောင့် မျက်စဉ်းလိုတယ်။ မျက်စဉ်းမှန်တာကို ရွေးသုံးတတ်ဘို့လိုပါမယ်။
• Dryness မျက်စိခြောက်နေတာအတွက် မျက်စဉ်း
စာအကြာကြီးဖတ်သူ၊ ကွန်ပြူတာ အကြာကြီးသုံးသူတွေမှာ ဖြစ်တတ်တယ်။ အိမ်အပြင်မှာ အကြာကြီးထွက်နေသူ၊ လေယျာဉ် အကြားကြီးစီးရသူ၊ ရေသောက် နည်းသူတွေမှာလဲ ဖြစ်တတ်တယ်။ အသက်ကြီးသူတွေမှာ ဇရာဖြစ်စဉ်ကြောင့် ဖြစ်တယ်။ အမျိုးသမီးကြီးတွေမှာ သိသိသာဖြစ်မယ်။ Nasal decongestants နှာခေါင်းထဲထည့်ဆေး၊ Diuretics ဆီးသွားစေတဲ့ဆေး နဲ့ Antidepressants စိတ်ကျဆေး သုံးနေသူတွေမှာလဲ လာဖြစ်တတ်တယ်။
မျက်စိခြောက်နေရင် Decongestant eye drop အမျိုးအစားမျက်စဉ်းကို ရှောင်ပါ။ ရက်ရှည်ခြောက်နေသူတွေအတွက် အရည်ထက် Gel or Ointment ကော်မျက်စဉ်း ပိုသင့်တယ်။ ဒါမျိုးခပ်လိုက်ရင် ခဏတာ ကြည့်မကောင်းဖြစ်တာမို့ ညမအိပ်ခင် ခပ်နိုင်တယ်။ မျက်စဉ်းတိုင်းမှာ အထားခံအောင် ဆေးတခုခုထည့်ရတယ်။ တချို့က ဒါမျိုးနဲ့ မတည့်ကြဘူး။ မျက်စဉ်းခပ်လိုက်မှ မျက်စိက နီလာ၊ ယားလာ၊ ရောင်လာရင် မတည့်ဘူးမှတ်ပါ။ ဒါကြောင့် Non-preserved eye drops အထားခံတာမပါတဲ့ မျက်စဉ်းကို အသုံးခိုင်းတယ်။
• Eye Drops for Redness မျက်စိနီတာအတွက် မျက်စဉ်း
Dryness မျက်စိခြောက်တာ၊ Allergy အလာဂျီရတာ၊ Infection ပိုးဝင်တာ၊ Tiredness မျက်စိအသုံးများတာ နဲ့ ဒီအကြောင်းတွေ စုပေါင်းဖြစ်တာတွေကြောင့် ဖြစ်တတ်တယ်။ Lubricating drop သုံးရတယ်။ ခပ်ရမှာကတော့ Decongestant eye drops ဖြစ်တယ်။ ဒါပေမဲ့ ဆရာဝန်ကို အရင်ပြသင့်တယ်။ သွေးကြောလေးတွေကို ကျဉ်းစေမယ်။ အခြေခံရောဂါ ရှိနေရင် အရှာရခက်စေတယ်။ သုံးမိရင် မျက်စိခြောက်စေတယ်။ ကြာရင် Irritation ကလိခံနေရသလိုမျိုး ဖြစ်စေပြီး နီလာမယ်။ သူငယ်အိမ်ကိုလဲ ကျယ်စေနိုင်တာ သတိထားပါ။
• Allergies, Eye Itching and Eye Drops အလာဂျီအတွက် မျက်စဉ်း
Itchiness ယားတယ်ဆိုတာ အလာဂျီကြောင့်ဖြစ်တယ်။ တခါတလေ ရောင်တာ၊ နီရဲနေတာ၊ မျက်ရည်ကျတာ၊ မျက်ခွံမို့တာတွေ အတွက်လဲ သုံးနိုင်တယ်။ အလာဂျီကြောင့်ဆိုရင် Lubricating drops လဲသုံးနိုင်တယ်။ မျက်စိကို မကြာခဏ ဆေးပေးရမယ်။ Antihistamine eye drops (Alaway or Zaditor) မျက်စဉ်းမှာ အလာဂျီရစေတဲ့ဓါတ်ကို ဆန့်ကျင်တဲ့ ဆေးပါတယ်။ တချို့ မျက်စိနီနေတာအတွက်သုံးတဲ့ Decongestant eye drops မျက်စဉ်းတွေထဲမှာ Antihistamines (အင်တီဟစ်တမင်း) ပါနေတတ်တယ်။
• Eye Drops for Soreness, Swelling or Discharge နာတာ-ရောင်တာ-တခုခုထွက်တာအတွက်မျက်စဉ်း -
Lubricating eye drops ကိုသုံးတယ်။ ဘာလို့ဖြစ်သလဲဆိုတာသိပါ။ ငိုထားလို့၊ ရောင်ရမ်းလို့ နဲ့ အလာဂျီတွေကြောင့် ဖြစ်တာတွေမှာ သုံးနိုင်တယ်။
• Eye infection မျက်စိပိုးဝင်တာကြောင့် မျက်ဝတ် အဖြူ-အဝါတွေထွက်တာအတွက် မျက်စဉ်း
1. Bacterial conjunctivitis ဗက်တီးရီးယားကြောင့်ဆိုရင် မျက်စိနီပြီးနာမယ်။ မျက်ဝတ်တွေ ထွက်မယ်။ Rx antibiotic eye drops ဆရာဝန်လက်မှတ်နဲ့ဝယ်ရတဲ့ ပိုးသေဆေးပါမျက်စဉ်းလိုမယ်။
2. Viral conjunctivitis ဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့်ဖြစ်တာက ခပ်ပေါ့ပေါ့ကနေ ဆိုးတာအထိဖြစ်နိုင်တယ်။ မဆိုးရင် သူ့ဖါသူ ပျောက်မယ်။ ဆိုတာကြောင့် နီရဲ၊ မျက်ရည်ကျ၊ မျက်လုံးနာ၊ မျက်ဝတ်ထွက်တာတွေ ဖြစ်လာမယ်။ မျက်စိ ကြည့်မကောင်းတာလဲ ဖြစ်နိုင်တယ်။ Lubricating eye drops သုံးနိုင်တယ်။ ရေအေးဝတ်၊ ရေခဲကပ်ပေးပါ။
3. Allergic conjunctivitis အလာဂျီကြောင့်ရောင်တာ အဖြစ်များတယ်။ ယား၊ ရောင်၊ မျက်ရည်ကျ၊ မျက်စိ နီရဲတာတွေ ဖြစ်မယ်။ မကူးစက်ဘူး။ Lubricating နဲ့ Antihistamine eye drops မျက်စဉ်းသုံးပါ။ ရေအေးဝတ်၊ ရေခဲကပ်ပေးပါ။ Antihistamines (Zyrtec or Claritin) စားဆေး သောက်နိုင်တယ်။ အလာဂျီကြာနေသူတွေက Benadryl ကို လနဲ့ချီသောက်ရတယ်။
မျက်စဉ်းတွေဟာ Saline ဆားရည်ပါတာတွေ ဖြစ်တယ်။ ဒါ့အပြင် Steroids စတီရွိုက်၊ Antihistamines အင်တီဟစ်တမင်း၊ NSAIDs အနာသက်သာဆေး၊ Anesthetics ထုံဆေး ပါတာတွေ၊ Sympathomimetics, Beta blockers, Para-sympathomimetics, Para-sympatholytics, Prostaglandins ဆေးတွေပါတဲ့ မျက်စဉ်းတွေ ရှိတယ်။ ဘာဆေးမှ မပါတဲ့ Lubricating နဲ့ Tear-replacing solutions တွေလဲ ရှိတယ်။ Rinse eye drops ခေါ်တယ်။ Glaucoma eye drops မျက်စိရေတိမ်မျက်စဉ်း၊ Mydriatic eye drops သူငယ်အိမ်ကို ကျယ်စေတဲ့ မျက်စဉ်းတွေလဲ ရှိတယ်။
မျက်စဉ်းတွေဟာ သက်တမ်းကုန်တာ မြန်တယ်။ အများအားဖြင့် ၄ ပတ်သာခံတယ်။ Syringe designed saline drops ဆေးထိုးအပ်လို ဆားရည်အမျိုးအစားလဲ ပေါ်လာတယ်။
- Advanced Eye Relief Dry Eye Environmental Lubricant Eye Drops မျက်စိခြောက်တာအတွက်မျက်စဉ်း
- Advanced Eye Relief Dry Eye Rejuvenation Lubricant Eye Drops မျက်စိခြောက်တာအတွက်မျက်စဉ်း
- Alcon Naphcon A Eye Allergy Relief အလာဂျီအတွက် မျက်စဉ်း
- Bausch & Lomb Opcon-A Eye Allergy Relief Drops မျက်စိ အလာဂျီအတွက် မျက်စဉ်း
- Betamethasone eye drops (ကော်တီဇုန်း) မျက်စဉ်း
- Carboxy methyl cellulose sodium eye drop ဆားရည်မျက်စဉ်း
- Chloramphenicol eye drops (ကလိုရမ်ဖင်နီကော) ပိုးသေမျက်စဉ်း
- Ciprofloxacin eye drop (စစ်ပရိုဖလောက်စာဆင်) ပိုးသေမျက်စဉ်း
- Clotrimazole eye drops (ကလိုထွိုင်မဇိုး) ပိုးသေမျက်စဉ်း
- Dexamethasone eye drops (ကော်တီဇုမ်း) မျက်စဉ်း
- Gatifloxacin eye drop (ဂတ်တီဖလောက်စာဆင်) ပိုးသေမျက်စဉ်း
- Gentamicin eye drops (ဂျင်တာမိုင်စင်) ပိုးသေမျက်စဉ်း
- Lobob Optimum Wetting and Rewetting Drops မျက်စိခြောက်တာအတွက်မျက်စဉ်း
- Neomycin sulphate eye drop (နီယိုမိုက်စင်) ပိုးသေမျက်စဉ်း
- Norfloxacin with dexamethasone eye drop (နော်ဖလောက်စာဆင်) + (ကော်တီဇုမ်း) မျက်စဉ်း
- Ofloxacin eye drops (အိုဖလောက်စာဆင်) ပိုးသေမျက်စဉ်း
- Similasan Computer Eye Relief Eye Drops (ဆင်မဲလ်ဆန်) ကွန်ပြုတာသုံးသူများအတွက်မျက်စဉ်း
- Similasan Dry Eye Relief Eye Drops မျက်စိခြောက်တာအတွက်မျက်စဉ်း
- Soothe Hydration Lubricant Eye Drops မျက်စိခြောက်တာအတွက်မျက်စဉ်း
- Soothe Lubricant Eye Drops (Preservative Free) မျက်စိခြောက်တာအတွက်မျက်စဉ်း
- Soothe Night Time Lubricant Eye Ointment မျက်စိခြောက်တာအတွက်မျက်စဉ်း
- Soothe Tired Eyes Lubricant Eye Drops မျက်စိခြောက်တာအတွက်မျက်စဉ်း
- Sparfloxacin eye drop (စပါဖလောက်စာဆင်) ပိုးသေမျက်စဉ်း
- Sulfacetamide eye drops (ဆာလ်ဖါစီတမိုက်) ပိုးသေမျက်စဉ်း
- Systane Ultra Lubricant Eye Drops မျက်စိခြောက်တာအတွက်မျက်စဉ်း
- Systane Ultra Preservative-Free မျက်စိခြောက်တာအတွက်မျက်စဉ်း
- Terramycin Eye Ointment (ဆာရာမိုင်စင်) ပိုးသေမျက်စဉ်း
- Thera Tears, Lubricant Eye Drops မျက်စိခြောက်တာအတွက်မျက်စဉ်း
- Visine A Eye Allergy Relief Eye Drops အလာဂျီအတွက် မျက်စဉ်း
- Walgreens Sterile Eye Allergy Relief Eye Drops အလာဂျီအတွက် မျက်စဉ်း
- Walgreens Wal-Zyr Itchy Eye Drops မျက်စိယားတာအတွက် မျက်စဉ်း
- Zaditor Antihistamine Eye Drops အလာဂျီအတွက် မျက်စဉ်း